Etu esi eji Kodi ma obu XBMC na gam akporo | Gam akporosis
Etu esi eji Kodi, ihe egwu egwuregwu gam akporo zuru ezu
Pablo Aparicio | | Ngwa gam akporo, gụgharia, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
You maara onye egwu mgbasa ozi Kodi? Ọ bụrụ na azịza ya bụ 'Mba', ị maghị ihe na-efu gị. Ọ bụrụ na ị jụọ m "gịnị ka m ga - eme Kodi?, M ga - aza" kedu ihe ịchọrọ ịme? Kodi ọ bụghị a onye ọkpụkpọ mgbasa ozi dị mfe iji, na n'eziokwu ọ were m ogologo oge ime ya mgbe a ka na-akpọ ya XBMC, mana, ozugbo anyị matara otu esi erite uru na ya, anyị nwere ike mụta ụdị ọdịnaya ọ bụla.
Kodi nwere ike igwu egwu site na egwu na ihe nkiri anyị chebere na draịvụ ike anyị iji rie ọdịnaya gụgharia, nke gunyere ikiri telivishọn dị ndụ, ma ọwa ego na akwụ ụgwọ. Dị ka m kwuru, ọ bụrụ na ị maghị ya, ị maghị ihe ị na-efu, ọ bụ ya mere anyị ji chọọ ịnye gị ozi bụ isi gbasara otu kachasị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kacha mma, ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi si Ebe ahụ. Ee ee ọ bụ dị maka gam akporo.
1 Akwụkwọ ntuziaka iji budata ma jiri Kodi na gam akporo
2 Etu esi etinye mgbakwunye na Kodi, anyị gosiri gị na vidiyo.
3 Ihe kacha mma maka Kodi
3.1 Akwụkwọ ozi Pelisala
3.2 Ndepụta Adryan
4 Ihe mgbakwunye ndị ọzọ akwadoro maka Kodi
5 Etu esi ekiri TV na Kodi
6 Kodi na gam akporo TV
6.1 Echichi si Google Play
6.2 Ntuziaka ntuziaka
Akwụkwọ ntuziaka iji budata ma jiri Kodi na gam akporo
Na Google Play na-agbatị nnabata nke ngwa nwere ihe ọjọọ ya na isi ya dị mma. Ihe dị mma bụ na ụlọ ọrụ gọọmentị ngwa ngwa gam akporo enwere ngwa niile, yana Kodi di na Google Play. Nke a abụghị otu a mgbe niile, ruo mgbe obere oge gara aga, anyị ga-aga web kodi.tv, họrọ nsụgharị maka ngwaọrụ anyị, nke nwere ike ime ka anyị nwaa nsụgharị abụọ ahụ ma ọ bụrụ na anyị amaghị ụdị nhazi nke ngwaọrụ gam akporo anyị ji, ma wụnye ya.
Ọ bụrụ na ọ gbanwee na ị na-eji nsụgharị nke gam akporo na-enweghị Google Play, nke na-abụghị nke nkịtị mana ọ ga-ekwe omume, dịka ọmụmaatụ, na Remix OS, ị nwere ike ịwụnye Kodi mgbe niile na usoro ochie.
Ozugbo arụnyere, anyị ga-eme ụfọdụ mgbanwe ndị akwadoro:
Ihe mbụ m na-eme bụ itinye Kodi n'asụsụ m, Spanish. Maka nke a anyị ga-aga System/ọdịdị/ Mba /asụsụ. Anyị pịa nhọrọ ma chọọ "Spanish".
Emechaa, mana nke a bụ mmasị onwe onye, ​​anyị nwere ike ịgbanwe etu esi egosipụta oge site na ngalaba "Mpaghara". M tinyere ya na «Spain (awa 24)».
Ọ bụrụ na anyị chọọ, anyị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ budata isiokwu maka interface site na ngalaba "Skin", mana nke a bụ ihe m na-anaghị akwado maka obere ihe kpatara ya: akpụkpọ "Confluence" bụ nke na-abịa na ndabara na ọtụtụ nkuzi na ụzọ gasị Anyị na-ekwukarị ha dabere na otu esi egosipụta ha na isiokwu ndabara.
Ugbu a anyị nwere Kodi n'asụsụ anyị, anyị ga-eme ya ka ọ mee ihe na-atọ ụtọ, nke anyị ga-etinye ụfọdụ mgbakwunye.
Etu esi etinye mgbakwunye na Kodi, anyị gosiri gị na vidiyo.
Na vidiyo nke m hapụrụ n'elu akara ndị a, ị ga - ahụ ka ọ dị mfe budata ma tinye KODI na gam akporo anyị yana bido ịwụnye mgbakwunye, usoro nke, n'agbanyeghị na ọ dị mfe ma nwee ọtụtụ ụzọ iji nweta ya, maka ndị ọrụ kachasị novice nwere ike ịbụ ezigbo mmekpa ahụ.
Wụnye mgbakwunye na Kodi Ọ dị mfe, mana enwere ọtụtụ ụzọ iji mee ya. Ọ bụrụ na anyị ahụla ya n'ịntanetị, anyị ga-enwe faịlụ .zip ma anyị ga-etinye ya site na isoro usoro ndị a:
Anyị na-aga Sistemụ /Tinye-ons/ Wụnye site na faịlụ.zip.
Anyị na-achọ faịlụ .zip nke anyị gaara ebudata.
Anyị na-ahọrọ ya ma ọ bụ ya. Anyị ga-echere ka ozi pụta na akuku aka nri dị ala na-adụ anyị ọdụ na etinyela mgbakwunye ahụ. O yikarịrị ka anyị ga-ahụ ihe arụnyere na anyị amaghị ihe ha bụ, mana ha bụ ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, a ga-etinye mgbakwunye ahụ n'ụzọ zuru ezu mgbe anyị hụrụ ozi na-agwa anyị na etinyere ihe nwere otu aha ahụ tinyekwara addon na ajụjụ ahụ.
Mana enwere uzo ozo akwadoro, nke bu itinye ihe ntinye ma tinye ha na ha. Usoro a dị ntakịrị karịa, mana ọ na-atụ aro ya na anyị ga-arụ ọrụ na ngwaọrụ ọ bụlan'agbanyeghị na ọ nweghị ike ịnweta faịlụ .zip. Anyị ga-agbakwunye ebe nchekwa site na isoro usoro ndị a:
Anyị na-aga Sistemụ / Njikwa faili. Kpachara anya, ịkwesighi ịbanye kpamkpam. Nhọrọ ahụ kwesịrị ịpụta n'okpuru isi menu ihuenyo.
Anyị na-emetụ na «Tinye isi iyi».
Anyị gbara na « ».
N'ebe a, anyị tinye URL nke nchekwa. Ekwadoro m ka ị wụnye SuperRepo, onye URL ya bụ http://srp.nu. Ozugbo banyere, anyị na-emetụ aka na «Emela».
Ọzọ, anyị metụrụ n'okpuru ederede na-acha anụnụ anụnụ nke na-ekwu "Tinye aha maka isi iyi mgbasa ozi a" ma anyị tinye aha maka ya. SuperRepo dị mma, mana anyị nwere ike itinye ihe anyị ghọtara nke ọma. Mgbe anyị nwere ya, anyị na-emetụ "Emela."
Iji chekwaa ya, na windo na-esonụ anyị pịa na «Ok».
Mana, agbanyeghị na ọ dị ka ọ dị, anyị agaghị enwe ike ịbanye na ebe nchekwa. Maka nke a, anyị ga-etinye ya. Anyị laghachi na isi ihuenyo wee Sistemụ /Addons/ Wụnye site na faịlụ.zip/superrepo, ọ bụrụ na nke ahụ bụ aha ị jiri zọpụta ya na nzọụkwụ 5.
Anyị na-ahọrọ folda Jarvis, nke bụ v16,
Anyị na-enweta nchekwa «niile».
Ọzọ anyị ga-emetụ na faịlụ .zip nke pụtara, nke n'oge edere bụ "superrepo.kodi.jarvis.all.0.7.04.zip" na, ugbu a, anyị ga-etinye ebe nchekwa ahụ.
Ozugbo anyị nwere repository arụnyere, iji wụnye mgbakwunye site na ya anyị ga-aga Sistemụ /Addons/ Wụnye site na nchekwa ma họrọ ebe nchekwa awụnyere nke, na nke a, ga-abụ "SuperRepo All [Jarvis] [v7]". N'ime anyị nwere ọtụtụ narị ịhọrọ site na ya, yabụ, m ga-atụkwa aro ole na ole bara uru itinye na Kodi ọ bụla bara uru nnu ya.
Ọ ka mma addons na Kodi
Enwere ọtụtụ ịhọrọ site na m ga-atụ aro maka abụọ m jiri mee ihe, ọ bụ ezie na m ga-agbakwunye ụfọdụ nke m maara ọtụtụ ndị ọrụ dịka.
Akwụkwọ ozi Pelisala
Pelisalacarta abụghị ihe ọzọ karịa mgbakwunye na-enye anyị ohere ịnweta ibe ebe ihe nkiri, usoro na akwụkwọ akụkọ dị. O nwere nhọrọ nke na-enye anyị ohere ịchọọ ọdịnaya ahụ ozugbo, agbanyeghị na ihe kachasị mma bụ, dịka ọmụmaatụ, ịbanye ntọala mgbakwunye ma hazie aha njirimara na paswọọdụ Pordede anyị, nke ga-enyere anyị aka ịhụ ihe nkiri na-echere, ọkacha mmasị anyị, wdg. , nke otu n'ime ibe kachasị mma nke ụdị ya. Pelisalacarta dị ka a ụlọ ahịa vidiyo dị n'ịntanetị, mana n'efu.
Adryan Adon na-enwetawanye ewu ewu na oge. Ọ bụ ihe mgbakwunye nke gụnyere ndụ ọwa TV (na ọdịnaya ndị ọzọ), nke ga-eme ka anyị lelee ọwa dị ka Canal Plus Liga na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe mgbakwunye ahụ na-asụ Spanish, nke pụtara na ọ nwere ọwa si Spain na Latin America. Akwadoro nke ọma, ọkachasị maka ndị ọrụ achọghị ikpo isi ha ọzọ.
Ihe mgbakwunye ndị ọzọ akwadoro maka Kodi
DexterTV: Ọwa TV si n'ọtụtụ mba.
Plexus: iji kpọọ ndepụta aha, dị ka rtsp, m3u8 na rtmp, mana ọ na-arụ ọrụ naanị na Sopcast na modest Acestream.
P2P iyi: na-arụkwa ọrụ na Sopcast na Acestreams modul. Ọ na-enye ogo dị elu karịa Plexus, mana ịchọrọ ezigbo njikọ ịntanetị.
EgwuregwuDevil- Nsọ grail nke egwuregwu, ma ọ bụghị dị mfe iji wụnye dị ka ndị ọzọ addons.
Etu esi ekiri TV na Kodi
Na mgbakwunye na nhọrọ dịka DexterTV ma ọ bụ Adryanlist, enwekwara ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ bụ maka ịwụnye, ma ọ bụ rụọ ọrụ mgbakwunye ahụ Mfe IPTV PVR Client, nke dị site Sistemụ /Addons/ Nke m tinye-ons/ Ndị ahịa PVR. Ihe ojoo bu na onye ahia a bu imeputa uzo ozo, ihe kariri inweta ma nke ahu juputara na intaneti. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ilele TV dị ndụ na Kodi site na mgbakwunye a, ị ga - agbaso usoro ndị a:
Site na ụzọ gara aga, anyị na-arụ ọrụ PVR IPTV Onye Ahịa Dị Mfe.
Ozugbo arụ ọrụ, anyị na-aga usoro usoro / TV / General.
Anyị na-arụ ọrụ igbe dị n'elu, nke dị n'aka nri nke «rụọ ọrụ».
Anyị na-alaghachi n'okporo ụzọ ahụ Sistemụ /Tinye-ons/ Nke m tinye-ons/ Ndị ahịa PVR / Mfe IPTV PVR Client ma anyị na-ahọrọ «Hazi».
N'oge a anyị ga-abanye na ndepụta anyị echekwara. Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ, mana m ga-elekwasị anya na abụọ:
Routezọ mpaghara. Site na nhọrọ a, naanị anyị ga-emepe faịlụ nke anyị ebudatara na mbụ.
Remote ụzọ. Anyị nwekwara ike tinye URL nke ndepụta ahụ anyị chọtara.
Ozugbo edebanyere ndepụta ahụ, anyị ga-amalitegharịa Kodi.
Mgbe ị banyere ọzọ, ndepụta ahụ ga-amalite ibu na nhọrọ TV ọhụrụ ga-egosi na isi ihuenyo nke ka mma ma dị mma karịa ndị mgbakwunye dị ka Adryanlist.
Kodi na gam akporo TV
Kodi dịkwa maka gam akporo TV. Enwere ike itinye ya n'ụzọ abụọ:
Echichi si Google Play
Dị ka ọ dị na nsụgharị maka mobiles na mbadamba, ọ nwere ike itinye ya Kodi na gam akporo TV site na Google Play na ntinye ya dị mfe dịka ịnweta ụlọ ahịa gọọmentị, na-achọ Kodi ma wụnye ma ọ bụ budata ya na njikọ nke m ga-agbakwunye na njedebe nke post a.
Ọ bụrụ na maka ebumnuche ọ bụla ị nweghị ike wụnye Kodi site na Google Play, anyị nwere ike mgbe niile ime ntuziaka nwụnye. Iji mee nke a, anyị ga-eso usoro ndị a:
Dị ka ọ dị na ngwaọrụ mkpanaka, anyị ga-ebu ụzọ gaa Ntọala / Nche na mgbochi ma rụọ ọrụ Unknown isi mmalite.
Ọzọ, site na kọmputa anyị ga-aga na weebụ http://kodi.tv/download/ na budata ụdị maka akụrụngwa anyị, nke nwere ike ịbụ ARM ma ọ bụ x86.
Anyị na-e copyomi faịlụ na USB pendrive.
Anyị jikọọ USB na gam akporo TV.
Site na gam akporo TV, anyị na-aga Google Play, anyị na-achọ ES File Explorer ma anyị wụnye ya.
N'ikpeazụ, anyị na-emeghe ES File Explorer, chọọ faịlụ ebudatara ma wụnye ya.
Ugbu a ị nweghị ike ịsị na ị maghị etu Kodi si arụ ọrụ na gam akporo, nri?
Developer: Ntọala Kodi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi eji Kodi, ihe egwu egwuregwu gam akporo zuru ezu
ụtụtụ ọma, daalụ maka ọrụ gị. Achọrọ m ịgwa gị na vidiyo ebe ọ na-akọwa etu esi etinye wụnye mgbakwunye anaghị arụ ọrụ. Daalụ nke ukwuu.
Zaghachi jose ignacio amador santos
Ndewo, a na m etinye ihe ọ bụla ọ dị mma mana mgbe m na-egwu ọwa tv ọ na-arụ ọrụ obere sekọnd ma ọ gbachichie, ọ dị m ka m na-ebugharị mana enweghị ekele, ekele
Ana m agbalị ibudata adryanlist, ọ na-agwa m na url a adịghị na sava ahụ, enwere m movidtar tv, m ga-ama otu ụzọ ọzọ isi budata ya
Zaghachi na Santiago antonio gonzalez de los santos
N'oge dị mma achọrọ m ikele gị maka ị nwetaghachi ụdị ochie nke kodi ma ọ bụrụ na ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma ana m enye gị enyi 5 kpakpando.
Google na-egosi na peeji nkwado ya mgbe akwụkwọ ikike maka ngwaọrụ Nexus ga-akwụsị
Twitter na-enye gị ohere izipu vidiyo na ogologo oge ruru 140 sekọnd